Qoysas ay abaaro saameeyeen oo raashiin la gaarsiiyay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qoysas ay abaaro saameeyeen oo raashiin la gaarsiiyay
16th April 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Guddiga caalamiga ah ee bisha iyo ururka bisha case e Soomaaliyeed ayaa raashiin u qeybiyay ilaa 60,000 oo ruux kuwaas oo kamid ah dadka ay abaaraha saameeyeen ee ku dhaqan waqooyiga Soomaaliya.
Sanakan ayaa waxaa si aad ah ugu hooseeyay roobabkii la filayay in ay ka da’aan deeegaanada isla markaana xaaladda bani’aadanimo sii xumeysay, waxayan taasi sababtay in qiimaha xoolaha nool uu hoos u dhaco maadaama dadka goboladan ku dhaqan ay nolashooda ku tiirsan tahay xoolaha nool.
Soomaaliya waxaa soo maraya xilliyo qalalan, oo ay biyaha guraan isla markaana baraagaha ay noqdaan isha keli ah ee biyaha laga helo, markaas oo dadka ay ku qasbanaadaan in ay lacag ku bixiyaan helidda biyaha.
Sanadkii 2015, 7,800 ruux ayaa la gaarsiiyay 23,000 abuurka geed timireedka si loogu caawiyo dhanka ganacsiga beeraha.